नयाँ प्रकारको भा’इरस अझै ख’तरनाक ! बेलायतमा एकैदिन १ हजार बढी’को – Dainiki Online
March 20, 2021 March 20, 2021 adminLeaveaComment on नयाँ प्रकारको भा’इरस अझै ख’तरनाक ! बेलायतमा एकैदिन १ हजार बढी’को
बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रकारको को’रोना भा’इरसले त्यहाँको जनजीवनमा अ’सर पुर्याएको छ । तीव्र सं’क्रामक मानिएको यो भाइरसका कारण त्यहाँ अहिलेसम्मकै धेरै दैनिक सं’क्रमित र दैनिक मृ’त्यु हुनेको संख्या रेकर्ड गरिएको छ। एकैदिन बेलायतमा कोरोना भाइरसका कारण १ हजार ४१ जना’को मृ त्यु भएको जनाएको छ । वर्षको अप्रिलपछिकै सर्वाधिक मृ त्यु संख्या हो । त्यहाँ एकै दिन ६२ हजार ३२२ जना संक्र;मीत भएको जनाएको छ ।
काठमाडाैं– भारतस्थित उत्तर प्रदेश राज्यकी टपर पल अग्रवालले पुन: अखिल भारतीय इन्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन) दिने भएकी छिन्। फेब्रुअरी दिएको परीक्षामा ९९.९८ प्रतिशत आएपछि उनले पुन: परीक्षा दिन लागेकी हुन्।६ लाख २० हजार विद्यार्थीले जेईई मेन परीक्षा दिएका थिए। जसमध्ये १ लाख ८७ हजार महिला थिए। जुन परीक्षमा अग्रवालले ९९.९८ प्रतिशत पूर्णांक हात पारेकी थिइन्। कुनै पनि विद्यार्थीले १०० प्रतिशत हालसम्म ल्याउन सकेका छैनन् तर, अग्रवाल यो रेकर्डमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छिन्।
१०० प्रतिशत नै ल्याउने आफ्नो लक्ष्य भएका कारण पुन: अप्रिलमा जेईई मेनको परीक्षा दिन लागेको उनले बताइन्। अग्रवालले भनिन्, ‘तयारी सुरु गरिसकेको छु। अब कमजोर पोइन्ट्समा मात्रै केन्द्रित हुनेछु। टेस्ट र मक टेस्टलाई फोकस गर्नेछु।’ १०० प्रतिशत स्कोर गर्नु उनको एकमात्र उद्देश्य भने होइन, उनी एयरस्पेस इन्जिनियरिङकाे लागि प्रवेश परीक्षामा पनि इतिहास रच्न चाहन्छिन्। उनलाई यसअगाडि नै किशोर विनायक प्रोत्सहान योजना अन्तर्गत छात्रावृत्ति प्रदान गरिएको छ। ‘मलाई सानो छदाँ ताराहरू हेर्न मन पर्थ्यो। म अन्तरिक्ष विज्ञानमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहन्छु।
रेखा थापा र बिप्लब बिच बिबाहाको हल्ला
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, बोर्ड र टेलिकमको वेबसाइटबाट हेर्न सकिने
चितवनका विभिन्न अस्पतालमा ११ सङ्क्रमितको मृत्यु